China Desktop mhando isina waya charja DW01 fekitori uye vanotengesa | Lantaisi
Desktop mhando isina waya charger DW01
DW01 iri 15W hombe simba desktop desktop isina charger iyo inoshandiswa kuchaja nhare mbozha uye TWS nharembozha zvigadzirwa. Paunenge uchida kubhadharisa nharembozha, isai padhesiki pamusoro, wobva wabatanidza simba remagetsi kutanga kubhadharisa. Bvisa iro dambudziko rekutadza kuwana yako yekuchaja tambo. Inogona kushandiswa kumba, hofisi kana dzimwe nzvimbo.
DW01 ndeimwe mhando yedesktop rudzi isina waya charger iyo inogona kuiswa pamusoro padesiki, tafura uye kunyangwe chero zvimwe zvinhu 'nzvimbo yekuchaja nharembozha yako zvisina waya.
Kuisa: DC 5V-2A, DC 9V-1.67A Ruvara: Kusvibisa, Nhema, sirivheri kana yakagadzirirwa ruvara
Zvinobuda: 10W kana 15W simba Saizi yebhokisi rechipo: 100 * 100 * 23mm
Kutengesa kure: 8mm kureba Kurema kwebhokisi rechipo: 120g
Chitupa: CE, RoHS, FCC zvitupa zvatinazvo Saizi katoni saizi: 400 * 315 * 375mm
Kugoverana mwero wekushandura: ≧ 80% Master katoni uremu: 14 KG
Kurema kwese: 90g Katoni pasuru huwandu: Zvidimbu 108 zvakazara mune rimwe katoni
Kukura kwechigadzirwa: Ø80 * H6.0mm Pasuru zvemukati: 1m yakareba Type-C tambo, mushandisi bhuku, mudziyo
Desktop isina waya charger -----
Kuchaja isina waya kwave kuripo kwenguva yakati wandei izvozvi, asi zviri chete mumakore mashoma apfuura ayo atanga kutora. Vazhinji uye vazhinji vagadziri vanga vachikwira neiyo ubiquitous Qi isina waya yekuchaja mwero uye iyo tech ikozvino iri mukati mukati meyese mafoni epamberi.
Saka chii chaizvo chiri kutengesa zvisina waya, chinoshanda sei uye foni yako inochitsigira here? Rega titendere kupindura iyi yese mibvunzo uye nezvimwe.
Samsung yakatsigira isina waya kuchaja kubvira iyo Galaxy S6 neHuawei yakazvizivisa neakanakisa Mate 20 Pro.
Apple yakagamuchira isina waya kuchaja neiyo iPhone X uye iPhone 8 uye iPhone 8 Plus. Kubva ipapo zvakaonekwa muiyo iPhone XS uye XS Max pamwe neiyo nyowani iPhone 11 uye iPhone 11 Pro pamwe ne iPhone XR uye chitsva-chizvarwa iPhone SE.
Nhamba inowedzera yemafoni zvakare inotsigira inodzosera isina waya kuchaja kwaunogona kubhadharisa zvimwe zvishandiso kubva kufoni - kuti uwane rumwe ruzivo nezve izvi, tarisa Chii chiri reverse waya isina kuchaja uye ndeapi mafoni anayo?
Chii chinonzi wayajaja?
Kuchaja isina waya ndekuchinjisa kwesimba kubva panotengeswa magetsi kuenda kuchinhu chako, pasina kudikanwa kwetambo yekubatanidza.
Inosanganisira pombi inotumira simba uye inogashira, dzimwe nguva muchimiro chekesi yakanamatira kune mbozhanhare kana yakavakirwa mufoni yacho. Patakataura kuti yaive isina tambo, haina kunyatsoita, nekuti iyo pad ichave netambo ichibva kubva kuburitsa mukati mayo.
Chigadzirwa uye Matipi ekuchengetedza:
Pashure: Chinese chidimbu 3 Muna 1 Wireless Chaja - Desktop Type isina wayajaja TS01 - Lantaisi
Zvadaro: Desktop mhando isina waya charja DW02
Desktop Wireless Chaja
Nhare mbozha Desktop Chaja
15W Wireless Kuchaja Pad - Yakanyanya Stylish ...
Desktop Type isina waya charger TS01
Desktop Type isina waya charger TS01 PU
Desktop mhando isina waya charja DW02
Dual Fast Wireless Chaja - Yakanyanya Multi-D ...